MIVONONA ISIKA VAHOAKA FA TSY MAINTSY ISIKA NO HAMARANA NY KRIZY – MyDago.com aime Madagascar
Raha miresaka ny famahana ny krizy isika hoy ny Ct Ravelonanaosy Mamitiana androany teny amin’ny Magro Behoririka dia hitantsika fa nanaomboka ny volana Novambra no niasa ny fikambanana iraisam-pirenena. Jereo tsara hoy izy fa ny filoha Ravalomanana Marc
dia veitvety dia namaly fa tsy hirotsaka kanefa Rajoelina hatramin’izao tsy nanambara ny heviny. Tokony ho tonga saina ny
vahoaka hoy Mamitiana fa tsy vonona hamaha ny krizy Rajoelina. Nandrasana tamin’ny volana desambra kanefa tsy nisy izany ary
hatramin’izao mbola tsy nilaza izy. Noho izany dia mivonona isika vahoaka fa tsy maintsy isika no hamarana ny krizy. Tsy misy fahavonona handray andraikitra izy fa ny filoha Ravalomanana Marc no nandefitra. Izahay mahatsiaro hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity fa isika foana no nametraka ny ara-dalàna hatrany Maputo ha hatramin’izao, fa ny sasany izay manao didy kofehy lehibe dia tsy vonona hamaha ny krizy. Andrasana ny hoe hiteny sa tsy hiteny hoy Mamitiana. Amiko hoy izy dia tsy ny fitenenany na tsia no vahaolana fa ny tondrozotra izay milaza mazava fa mody ny filoha Ravalomanana Marc, ny fanokafana ny radio nakatona, ny famoahana ny gadra politika. Misy fitoniana politika ve hoy izy izany sa savorovoro politika.
Auteur Solo Razafy*Publié le 7 janvier 2013 Catégories Politique
3 pensées sur “MIVONONA ISIKA VAHOAKA FA TSY MAINTSY ISIKA NO HAMARANA NY KRIZY”
Tairo aloha ny CI amin’ny MANDAT D’ARRET INTERNATIONAL mikasika an’i Rajoelina e !
dia tairo sy TARIO ny vahoaka HANDROAKA an-dRAJOELINA !
Miandry sioka tokana ny vahoaka fa…..LEO !!!
8 janvier 2013 à 8 h 22 min
MARINA IZANY ARY TOKONY HO VOASAZY MAFYBE IZY SATRIA IZAY AO ANATIN’NY TETEZAMITA ARAKA NY TONDROZOTRA TSY MAHAZO MILATSAKA KA INONA NO HOLAZAINY EO INDRAY ? TSY VONONA NY HAMAHA NY KRIZY MIHITSY RAJOELINA FA HANAO NY LOHANY MADITRA ARY MAMPATAHOTRA MIHITSY NO HIAFARANY EO NA DIA MANANA VOLA BE AZA IZY – TSY MATOTRA HANY KA HIAFARA AMIN’NY FAHATEZERAN’ANDRIAMANITRA, MBA FANTANY MOA VE IZANY !
Voalohany indrindra, fanontaniana kely ho an’Ingahy Ravelonanosy : Ianao ve rahampitso, hanaraka an’i Manoela sy ireo izay mitovy hevitra aminy, sa hanaraka izany hoe « baiko-baiko » izany ?
Araky ny fantatra mantsy, dia toa tsy nanome izany « baiko » izany mihintsy ny Filoha Ravalomanana. MBA TENA AVY AZA AIZA IZANY HOE BAIKO IZANY ?
Faharoa, manarak’izany :
« Tokony ho tonga saina ny vahoaka hoy i Mamitiana fa tsy vonona hamaha ny krizy Rajoelina……Noho izany dia mivonona isika vahoaka fa tsy maintsy isika no hamarana ny krizy »
Hay ve ianareo mbola tsy vonona ê !
Izao ve ry zareo no tena atao hoe resaka matavy an ? Mba lasa ihany ny saina ! Faran’ny 2008 no TENA nanomboka ny krizy ary efa 2013 isika izao, dia mbola tsy fantatrareo ihany ve hoe IZA AVY IREO TSY VONONA HAMAHA NY OLANA ?
Miala tsiny ihany koa fa tsy dia mety ilay hoe « isika vahoaka » ; ianao mantsy tsy anisany satria OLONA AO ANATIN’ILAY RAFITRA !! Ny vahoaka dia ireo izay mihaino anareo isan’andro ireo, na koa ireo rehetra izay tsy tonga satria reraky ny krizy na koa kivy, mba tsy hitenena hoe leo mihaino resaka MANABE LAO-BARY !
Mbola tsy azonareo foana ve ny dikan’ilay hoe 10 isan-jaton’ny asa, no anjaranareo ê ?
Ao anatin’ilay 10 % ve itony ?
8/01/2013 à 9:27 Mamy Rakotoarivelo : »Tous les membres de la mouvance Ravalomanana invités seront là demain ».
Mahagaga ihany satria, efa nisy taminareo nilaza fa tsy ho any. Inona no tena antony mbola hanomezam-boninahitra olona efa fantatra fa mpanongam-panjakàna sy namono ny mpiara-belon’aminy ? Tsy mazava aminareo angaha ireny fanambaràna nataon’i Sarla ireny ?
Dia hiaran’ny sazy izany ireo rehetra izay nasaina, kanefa tsy handeha ? Izany ve no dinika be atao ao Bel Air ao amin’izao ora izao ? Mandeha ihany koa mantsy ny resaka fa mety hisy « rafitra vaovao » atsy ho atsy, raha ny marimarina kokoa rehefa vita « ilay fandaharana ao amin’ny fahita-lavitra », amin’ny azoma izao.
Ho tonga eny Tsimbazaza ny tena vahoaka, hijery an’ireo izay hitaingina ôtôbisy ! Tandremo misy miafina fa ny mpamosavy mandeha alina aza, hoy ny malagasy, misy mahita foana !
Précédent Article précédent : Me RASAMIMAKA MAHEFALAHY : SAMIA MIVAVAKA MAFY MBA TSY HO ENTIN’NY DEVOLY NY FIRENENA
Suivant Article suivant : RALAISEHENO GUY MAXIME : TOHANANTSIKA HATRAMIN’ NY FARANY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC